2011-08-07 ~ Myanmar Express
အမေ့ခြေရာနင်းနိုင်တဲ့ သမီးလိမ္မာ ကရင်မလေး
အမေစုက နိုင်ငံခြားသားနဲ့ ဒီလိုတွဲပြတော့သမီးတို့ကလည်း အမေ့ခြေရာနင်းရမျာပေါ့နိုင်ငံခြားသားနဲ့ နေရလို့ အမေစုက တအားပျော်သလိုသမီးတို့ကလည်း နိုင်ငံခြားသားနဲ့ဆို ပျော်မှပျော်အမေစုက နိုင်ငံခြားသားကို အမြဲတမ်းတွဲပြနေတော့သမီးတို့ကလည်း ကရင်အမျိုးသားနေ့မှာ တွဲပြရတာပေါ့အမေစုက နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ဒီလိုအဖက်ခံတော့အမေစုကို လေးစား အတုခိုးနေတဲ့ သမီးတို့က လိုက်လုပ်ရတာပေါ့အမေစုက နိုင်ငံခြားသားတွေ ပေါ်ပေါ် တက်ထိုင်ပြခဲ့တော့အမေ့ခြေရာနင်းနိုင်အောင် နောက်ငံခြားသားပေါင်ပေါ် လိုက်ထိုင်ရတာပေါ့အမေစုကတော့ ကွယ်ရာမှာ နိုင်ငံခြားသားနဲ့ ဒီလိုနေခဲ့ပေမယ့်သမီးတို့က ဒီမိုကရေစီလေအမေစုပြောတဲ့ ပွင့်လင်း မြင်သာမှုရှိရေးဆိုတာလေအမေစုပြောတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးsee more photo:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.146622282088078.39375.100002209222612Myanmar Express
ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသူများအား ချွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးရေးအတွက် အကျွမ်းကျင်ဆုံးဖြစ်သည့် မြန်မာအတိုက်အခံများမှ ဦးဆောင်တောင်းဆိုသင့်
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ ရဲက ၂၉ နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ယောက် အဖေကို ရဲက သေနက်ဖြင့် ရက်ရက်စက်စက် ပစ်သတ်ခဲ့မှုအပေါ် မဖြင့်သင့်ဘူးဟူသည့် ယုံကြည်ချက်ဖြင့် ကျောင်းသားတွေ က ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဗြိတိန်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများက ရဲဝန်ထမ်း ပစ်သတ်ခဲ့သည့် ကိစ္စအတွက် တစ်စုံတစ်ရာဖြေရှင်းချက် မပေးသည့်အပြင် ဆန္ဒပြကျောင်းသားများကို ရဲအင်အားတွေ ထပ်တိုးချထားပြီး ဖမ်းဆီးခြင်းတွေ၊ ရိုက်နှပ်ခြင်းတွေ နဲ့ တုန့်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဗြိတိန် ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး ထရီဇာမေ က ဆူပူလုယက်မှု တွေ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရပ်တွေ က လမ်းမတွေ မှာ လုံခြုံရေး အတွက် ရဲ ဝန်ထမ်း တွေ ကို ထပ်တိုး ပြီး ချထားမယ် လို့ ပြောလိုက် ပါတယ်။အရင် ပုံမှန် အချိန် တွေတုန်းက စနေ နဲ့ တနင်္ဂနွေ လို အလုပ် ပိတ်ရက် တွေ ကျရင် လန်ဒန် က လမ်းမ တွေ အပေါ်မှာ ရဲ အရေ အတွက် ၂၅၀၀ ချထားလေ့ ရှိပေမယ့် အခုဆိုရင် ရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင် ပေါင်း ၁၆၀၀၀ ချထားမယ် လို့ လန်ဒန် က ထိပ်တန်း ရဲ အရာရှိကြီး တဦး က ပြောပါတယ်။အခုဆိုရင် အင်္ဂလန် က ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်း ခံနေရသူပေါင်း ၁၅၀၀ ကျော်အဖမ်းခံ ထားရပြီး ဒီ အထဲ က လူ ၁၀၀၀ လောက် က လန်ဒန် မှာ ဖမ်းထားတဲ့ သူတွေပါ။ သူတို့ကို ပြစ်ဒဏ် ချရင် အရင် အလားတူ အပြစ်မျိုး ပြစ်ဒဏ်ပေး တာ ထက် ပိုပြင်းထန် တဲ့ အရေးယူမှု ကို လုပ်မယ် လို့ လည်း သိရ ပါတယ်။ ဒီနေ့ထိလည်း ဗွီဒီုယို ကင်မယာများကို ပြန်ကြည့်ပြီး ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဆန္ဒပြသူ ကျောင်းသား လူငယ်များကို အိမ်တိုင်ရာရောက် ဖမ်းဆီးနေတုန်းဖြစ်တယ်လို့ ဘီဘီစီ က ပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကို ဖမ်းဆီးသည့်အပေါ် မှာ ကျွမ်းကျင်သူများအနေဖြင့် သဘောထား အမျိုးမျိုးကွဲပြားလျှက်ရှိပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေက သူပုန်တွေ၊ သခိုးတွေမဟုတ်ပဲ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသူများသာ ဖြစ်သောကြောင့် မဖမ်းသင့်ကြောင်း ဝေဖန်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။"ဒီကျောင်းသားတွေက လူဆိုးတွေမဟုတ်ပါဘူး.. သူခိုးဓါပြတွေ မဟုတ်သလို၊ သူပုန်တွေလည်း မဟုတ်ပါဘူး.. သူတို့ဟာ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဆန္ဒပြနေကြသူတွေပါ .. အခုဆိုရင် ဖမ်းထားတာ ၂၀၀၀ နီးပါးရှိပြီး.. အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်ဖမ်းနေတုန်းဆိုတာ ကြားရလို့ အလွန်စိုးရိမ်မိပါတယ်... ဒီလို ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေအားလုံး ချွင်းချက်မရှိ ပြန်လွတ်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံအားလုံးက တောင်းဆိုသင့်တယ်.. လိုအပ်ရင် ကုလသမ္မက အထူးစုံစမ်း ကော်မရှင် ထိ တင်ပြသင့်တယ်" လို့ ဝါရင့် အကျဉ်းသားဟောင်းတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ "ဒါမျိုးတွေ ကို အမြဲ ငိုပြ တောင်းဆိုတတ်တဲ့ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူတွေက လုပ်နေကြဖြစ်လို့ ပိုမိုကျွမ်းကျင်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဖြစ်တယ်.. ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စကို တခြားနိုင်ငံတွေက မတောင်းဆိုရင်တောင် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူတွေက ဦးစီးတောင်းဆိုသင့်တယ်" လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဆန္ဒပြသူ ကျောင်းသားတစ်ဦးကို ရဲက ရိုက်နှပ်ဖမ်းစီးသွားစဉ်ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဆန္ဒပြသူ ကျောင်းသားတစ်ဦးအား လက်နက်သုံး အနိုင်ကျင့်နေသည့် ဗြိတိန်ရဲယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဆန္ဒပြသူ ဗြိတိန် ကျောင်းသားတစ်ဦး အား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် လေးဦးမှ တရွတ်တိုက် ဆွဲခေါ်သွားစဉ်ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဆန္ဒပြသူ ကျောင်းသားတစ်ဦး အား ရဲ သုံးဦးမှ လက်ပြန်ချိုးပြီး ခေါ်ဆောင်သွားစဉ်ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဆန္ဒပြသူ ကျောင်းသားတစ်ဦးအား ရဲအရာရှိ တစ်ဦးမှ လည်ပင်းညှစ် သတ်နေပုံယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဆန္ဒပြသူ ကျောင်းသားများကို ဗြိတိန် အာဏာရှင်အစိုးရမှ အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် အင်အားသုံး နှိုမ်နှင်းစဉ်ခေါင်းတွေ၊ လက်တွေမှာ သွေးတွေ ထွက်နေသည့် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဆန္ဒပြသူ ကျောင်းသားတစ်ဦးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လို ညှင်းပန်းခံနေရသည့် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဆန္ဒပြသူ ကျောင်းသားတစ်ဦးပြည်သူအားလုံးရှေ့မှာ ဖိနိပ်ခံနေရသည့် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဆန္ဒပြသူ ကျောင်းသားတစ်ဦးတစ်ကိုယ်လုံး သွေးများထွက်ကာ လဲနေသည့် ရဲတွေကြားမှ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဆန္ဒပြသူ ကျောင်းသားတစ်ဦးယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဆန္ဒပြသူ ကျောင်းသားတစ်ဦးအား အီရက်မှ လူအစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ခဲ့သူ တစ်ဦးပမာ ရဲများက ဆက်ဆံစဉ်လန်ဒန် မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ ည က စပြီး ဆူပူလုယက်မှု တွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီး နောက်ထပ် ၄ ရက် ဆက်တိုက် လန်ဒန် နေရာ တော်တော်များများ နဲ့ အင်္ဂလန် က အချို့ မြို့ တွေ ကို ပျံ့နှံ့ သွားခဲ့ ပါတယ်။ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု အများအပြားရှိခဲ့ပေမယ့် ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အနောက်အုတ်စုမှ တစ်စုံတရာ ပြောဆိုခြင်း မရှိခဲ့ကြပါဘူး။ဒါမျိုးနေရာတွေမှာ အကျွမ်းကျင်ဆုံးဖြစ်သည့် မြန်မာအတိုက်အခံများဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဆန္ဒပြသူ ကျောင်းသား ၂၀၀၀ နီးပါးအတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ငှတ်လွှတ်ပွဲကျင်းပဖို့လို Myanmar Express
အပြန်အလှန် တရားစွဲ ရပ်စဲရေး အတွက် Myanmar Express မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ မောင်နှမ သို့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ
၁။ ဦးအောင်ဆန်းဦး + ဒေါ်လဲ့လဲ့နွယ်သိန်း
၂။ (မိုက်ကယ် အဲရစ်) + ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၂) ရက်
ထို့အပြင် တိုင်းရင်းသား တစ်မျိုးနှင့် တစ်မျိုးကြား ချစ်ကြည်ရင်းနီး သွေးစည်းညီညွတ်ဖို့ထက် မောင်နှမချင်း ဆွေမျိုးရင်းခြာချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီး သွေးစည်း ညီညွတ်ရေးမှာ အရေးအကြီးဆုံးပင်ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ မိုက်ကယ် အဲရစ်၏ မိန်းမ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဒေါ်လဲ့လဲ့နွယ်သိန်း ၏ အမျိုးသား ဦးအောင်ဆန်းဦး တို့အကြား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ဘိုးဘွားအမွေ အပိုင်စီးသည့် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားလျက် ရှိကြောင်း ကြားသိ နေရပါသည်။ ယင်း ပဋိပက္ခ များကြောင့် ကျဆုံးသွားသည့် အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ကြည်တို့လည်း တမလွန်ဘဝမှ စိတ်မချမ်းမြေ့ဖြစ်နေမည် မှာ သေချာသည်။ အထူးသဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုသည်မှာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ဖြစ်နေသာ မ တစ်ထောင် သားများကို ချစ်ကြည်ရင်းနီးပြီး သွေးစည်းစေတဲ့ ပင်လုံညီလာခံကို ဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ရာ ယင်း၏ မျိုးဆက် သား နှင့် သမီး က သွေးမစည်းပဲ ရန်ဖြစ် အမွေလုနေသည်မှာ စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းပါသည်။ အထူးသဖြင့် စံနမူနှာပြ နေထိုင်ပြ သင့်သည့် မြန်မာ့အမျိုးသား ဖခင်ကြီး၏ သမီးက မြန်မာမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားကို ယူ၊ မြန်မာမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ အနှစ် ၃၀ ကျော်နေ၊ မြန်မာ စကားမပြောတတ်တဲ့ ကလေး နှစ်ယောက်မွေးပြီး မြန်မာအချင်းချင်းယူထားတဲ့ အစ်ကို ဖြစ်သူကို ရန်လိုနေခြင်းသည် လွန်စွာမှ မဖြစ်သင့်သည့်အပြင် နောင်လာမည့် မြန်မာမိန်းခလေးများက အတုယူပြီး လိုက်လုပ်ပါက အလွန် အန္တရာယ် ရှိနေပါသည်။
ယင်း အမွေလုပွဲ ပဋိပက္ခများနှင့် ပြဿနာများကို သူတပြန် ကိုယ်တပြန် အပြန်အလှန် ရုံးတင် အမှုဖွင့် မာနထား ဖြေရှင်းကြမည် ဆိုလျှင် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် မောင်နှမချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ပျက်ပြားကာ အကျိုးဆုတ်ယုတ် မှုများသာ ဖြစ်ပေါ်ပါမည်။ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးမပြောနှင့် မောင်နှမ ရင်ကြားစေ့ရေးကိုပင် ဤနည်းဖြင့် တည်ဆောက်၍ မရနိုင်ပါ။ မိသားစု နည်းလမ်း ဖြစ်သော ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းခြင်းဖြင့်သာ တည်ဆောက် သွားကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မောင်နှမချင်း ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်း နိုင်ကြမှသာလျှင် ဗိုလ်ချုပ်၏ မျိုးဆက်တစ်ခုလုံး အနာဂတ်ကို အာမခံနိုင်မည့် စစ်မှန်သော မိသားစု သွေးစည်းညီညွတ်မှုကို ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ စစ်မှန်သော မိသားစုတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ပြေလည်မှု မရရှိလျှင် အိမ်တွင်းမီး ဟူ၍ ကျယ်ပြန့် သွားနိုင်သည့် အန္တရာယ် ရှိတတ်ပါသည်။
မောင်နှမ သားအချင်းချင်း အကြား ဖြစ်ပေါ်နေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ဘိုးဘွားအမွေ အပိုင်စီးခြင်း ပြဿနာများကို တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊ တစ်မိသားစုနှင့် တစ်မိသား စု အပြန်အလှန် နားလည်မှု၊ အပြန်အလှန် ယုံကြည်လေးစားမှု တို့ဖြင့် ဖြေရှင်းကြမည် ဆိုလျှင် ပြေလည်မှု ရရှိကြပြီး မိသားစုကြီး ငြိမ်းချမ်း တည်ငြိမ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ မိသားစုကြီး ချစ်ခင် ငြိမ်းချမ်း တည်ငြိမ်မှသာ နေထိုင်ရာ ရက်ကွက်လေးအတွင်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
သို့ပါ၍ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း မှီတင်း နေထိုင်ကြသော ဦးအောင်ဆန်းဦး မိသားစု၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပြည်ပတွင် မှီတင်းနေထိုင်ကြသော အလက်စန္နား အဲရစ် နှင့် ကမ်အဲရစ် တို့ အားလုံး၏ အကျိုးစီးပွား များကို ရှေးရှု၍ ယခု ဖြစ်ပွားနေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ဘိုးဘွားအမွေ အပိုင်စီးမှု ပဋိပက္ခများကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်း ကြပါရန်နှင့် အမြန်ဆုံး အပြန်အလှန် တရားစွဲ ရပ်စဲကြပါရန် လေးနက်စွာ ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
အပြန်အလှန် တရားစွဲ ရပ်စဲရေးနှင့် နောင်နှမချင်း ချစ်ခင်ကြည်နူး ကာ မိသားစုတွင်းငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် ကျွန်တော်တို့ Myanmar Express Group အနေနှင့် ကိုယ်စွမ်းရှိသမျှ ပါဝင် ကြိုးပမ်းပေးရန် အသင့်ရှိပါသည်။
အာရပ်လှိုင်း အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးက ဗြိတိန်ကိုပျံ့နှံ့တာလား...? ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတွေကိုက ရမ်းကားတတ်၊ ဆိုးသွမ်းတတ်ပြီး နိုင်ငံကြီးသား မပြီသတတ်တာလား..?
အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ အာရပ်တခွင်ကနေပြီး အာရှပဲပျံ့မလိုလိုနဲ့ ဥရောပကို ပျံ့လာခဲ့ပါတယ်။ အီဂျစ်၊ တူနီးရှား၊ ဘာရိမ်း၊ လစ်ဗျား တို့မှတဆင့် ခုဆိုရင် လန်ဒန်မြို့သာမက နယ်မြို့များထိ ပျံ့ကာ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်နေပါပြီ။ ပြဿန အစ ကတော့ လက်နက် အားကိုးဖြင့် ဗြိတိန်ရဲမှ လန်ဒန်မြို့မြောက်ပိုင်း၌ သြဂုတ် ၆ ရက် ညပိုင်းက လူတစ်ဦးအား သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခံမှုအပေါ် မကျေနပ်၍ လူတစ်စုကရဲကားနှစ်စီးကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်ရဲအနေနဲ့ နိုင်ငံသားချင်း လက်နက်ကိုင် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခြင်းမျိုး လုံးဝ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဒါမျိုးကိစ္စကို အထူးသဖြင့် မြန်မာအတိုက်အခံတွေက လုံးဝလက်မခံတတ်ပါဘူး။ ကုလသမ္မဂ္ဂနဲ့ အမေရိကန်ကလည်း လက်မခံတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခုတော့ အကြမ်းဖက်မှု လုံးဝ မလိုလားတတ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် ဘယ်မြန်မာအတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုမှ သဘောထား ထုတ်ပြခြင်း မပြုသေးသလို ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အမေရိကန်ကလည်း ၄ ရက်ကြာပြီး အတော်လေး ပြာကျတဲ့အပြင် လူ ၅၀၀ ခန့် အဖမ်းခံထားရတာကိုပဲ မစိုးရိမ်နိုင်ကြသေးပါဘူး။ပြဿတာ ဖြစ်စဉ်မှာလန်ဒန်မြို့မြောက်ဘက် တော့တင်တမ်ရဲစခန်းအပြင်ဘက်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် မက်ဒတ်ဂန်အမည်ရှိ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးအား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ လူထု အုံကြွမှု တွေ ဟာ ဒီနေ့ တတိယမြောက် ည အဖြစ် ဆက်အားကောင်းလာ ခဲ့ ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ကလည်း လူ ၁၀၀ ကျော် ကို ဆက် လက် ဖမ်းဆီး ထား ကာ မြောက်ပိုင်း နဲ့အနောက် ပိုင်း လန်ဒန် တွေ မှာ လူထု အုံကြွမှု တွေ ဆက်လက် အားကောင်း နေပါတယ်။ ဒီနေ့ မနက် ဖြစ်ပွား တဲ့ လူထု အုံကြွမှု တွေ မှာ ရပ်တပ် ဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦး ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိ ပြီး လှုပ်ရှား သူ ငါးဦး ထက် မနည်း လည်း ဒဏ်ရာ ရရှိ သွား ပါတယ်။ တစ်ချို့သတင်း တွေ မှာ တော့ အဓိကရုဏ်း နှိမ်နှင်း တဲ့ ရဲ တွေ ဟာ သတင်းထောက် နဲ့ဗီဒီယို၊ ဓာတ်ပုံ ရိုက် ကူးသူ တွေ ကို ပါ နှိပ် ကွပ် တယ် လို့ဆိုပါတယ်။ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေ လူသားခြင်းညှာတာမှုတွေ လည်း ပျောက်ကုန်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာ့သတင်းအလွတ်လပ်ဆုံးနဲ့ သတင်းသမား အခွင့်အရေး အရရှိဆုံး ထိပ်ဆုံးစာရင်းမှာ ရပ်တည်ဆဲပါပဲ။လန်ဒန် လူထု အုံကြွမှု ဖေ့ဘွတ်၊ တွစ်တာ တို့ ထက် Blackberry Messenger က လူတွေ အများ ကြီး စုရုံးအောင် လုပ် ဆောင် နိုင် တယ်လို့အင်ဒီပင့်ဒက် သတင်းစာ မှာ ဖော်ပြထား ပါတယ်။ လန်ဒန် လူထု အုံကြွမှု ဟာ ဘာမင်ဂမ်၊ ဆိုင်ရိုဒမ် နဲ့လီဗာပူး မြို့တွေ ထိ ကူးဆက်သွား ပြီး ပစ္စည်းလူယက် မှု တွေ ၊ အဆင့် မြင့် ကုန်တိုက် တွေ နဲ့ လျှပ်စစ် ပစ္စည်း ဆိုင် တွေ ကို ဖောက် ထွင်း မှု တွေ ထိ ပါ ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ်။စနေ့ နေ့ညက မီးရှို့ ဖျက်ဆီးမှု တွေ စကတည်း က စပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ က လူပေါင်း ၂၅၀ နီးပါး လောက် ကိုဖမ်းဆီးထား ပြီး ဒီအထဲ မှာ ဆယ်ကျော်သက်တွေ နဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုတာ အမှန်တရားအတွက် ရပ်တည်နေသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ၈၈ ကျောင်းသားတွေ ဦးစီးခဲ့တဲ့ အရေးအခင်းကိုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် မြန်မာ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားတွေက မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဗြိတိလျှ အောက်လွှတ်တော် အမတ်တစ်ဦးကတောင် သဝဏ်လွှာတွေ ဘာတွေ ပေးခဲ့ပြီးမှ ခု တော့ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေကို ဖမ်းဆီး နေကြပြန်ပါပြီ။ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ကြည့်ကာ ဗြိတိန်ရောက် မြန်မာတွေလည်း ကျီးလန့်စာစားနေရပါတယ်။ ခုလောက်ဆိုရင်တော့ ဗြိတိန်အပါအဝင် အမေရိကန်ကစလို့ ကုလသမဂ္ဂလည်းပဲ ကျောင်းသားတွေ ဆန္ဒပြရင် ဖမ်းစီး နိမ်နှင်းသင့်ကြောင်း လက်ခံသဘောက်ပေါက်ကာ နားလည်လောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ လန်ဒန် မြောက်ပိုင်း တော့တင်ဟမ် အရပ် တွင် သောကြာနေ့ က စပြီး မငြိမ် မသက် မှု များ ဖြစ်ပွားလျှက် ရှိ ရာ စနေ နေ့ ည တွင် ဒေသ ခံ တို့ရဲကား နှစ်စီး ၊ ခရီးသည် တင် ဘတ်(စ)ကား နှင့် ဆိုင်များ ကို မီးတင် ရှို့ လိုက်ကြ သည်ဟု ဂါးဒီးယန် သတင်း စာ အင်တာ နက် စာ မျက် နှာ တွင် ဖော် ပြထား သည်။စနေ နေ့ က ဒေသခံ များ က High Road ရှိ ရဲတပ် ဖွဲ့စခန်း ကို ၀ိုင်းထား ကြပြီး သေဆုံးမှု နှင့် ပတ်သက် ၍ စုံစမ်း စစ်ဆေးပေးရန် တောင်း ဆို ကြပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြ သူများ က “ ငါတို့အဖြေ လိုချင် တယ်။ ဘယ်သူ့ လမ်းလဲ ။ ငါတို့ လမ်း ပဲ ကြွေးကျော် ကြသည်။ "ရရင်ရ မရရင်ချ" ဆိုပါတော့။ အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ အဲ့လိုလုပ်ရင်တော့ ဘယ်နိုင်ငံက အုပ်ချုပ်သူမှ ညင်ညင်သာသာ မကိုင်တွယ်ဘူးဆိုတာကို ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်းများ နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ ၈၈ ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေ ကို အားပေးထောက်ခံနေတဲ့ နိုင်ငံကြီးက ကျောင်းလည်းအခွင့်အရေးတွေ၊ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးတွေ မသိတော့ပဲ အကုန် ဖမ်းစီးရိုက်နှပ်နေပါပြီ။ ညဦး ပိုင်း တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒ ပြ မှု သည် တွစ်တာ နှင် ဖေ့ဘွတ် လှုံဆော်မှု များ ကြောင့် ပိုမို အား ကောင်းလာ ပြီး နော် တရားမျှ တမှု ရှိရန် တောင်း ဆို နေ စဉ် ရဲစခန်း က တုတ်တုတ် မျှ မလှုပ် သော ကြောင့် အများ ထက် ပိုမို တက်ကြွသူ တစ် ဦး စ နှစ် ဦးစ က ရဲကားများ ကို မီးတင် ရှို့ ရာမှ လူထု အုံ ကြွမှု အားကောင်း လာခြင်း ဖြစ်သည်။လန်ဒန် မြို့ ခံ များ ၏ တွစ်တာ များ တွင် မူ ဗြိတိသျှ ထောက်လှမ်းရေး များ က ယခု ကဲ့ သို့အဓိကရုဏ်း ဖြစ်စေရန် လမ်းလွှဲ ခဲ့ ခြင်း ဖြစ် သည် ဟု ဆို သည်။တော်တင်ဟမ် မြို့အလက်ဇန္ဒ ဟစ်ဂင် ဘလောက် တွင် မူ မနက် ဖြန် တွင် တော် တင် ဟမ် အထွေထွေ သပိတ် စရန် နှိုးဆော် ထား သည်။ လူထု ၏ အားကောင်းစွာ အုံကြွ မှု ကြောင့် ရဲ တပ် ဖွဲ့ဝင် ကိုး ဦး ဒဏ် ရာ ရရှိ သည်။ ဌာနေ လွှတ်တော် အမတ် ကမူ တည်ငြိမ် အေးချမ်း ကြရန် ပန်ကြား ခဲ့ သည်။ထပ်မံ ရရှိသည့် သတင်းများအရ ပြင်းထန်သည့် လူထု အုံကြွမှု ကြောင့် တော်တင်ဟမ် ရဲတပ် ဖွဲ့ဝင် ၂၆ ဦး မဆို စလောက် ဒဏ်ရာများ ရရှိ သွားပြီး ဆန္ဒပြသူ ၄၆ ဦးကို ဖမ်းဆီး ထိမ်း သိမ်း ထား သည် ဟု သိရသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အိုလံပစ်ပစ် ပွဲကို အင်္ဂလန် က အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပမည် ဖြစ်ရာ လန်ဒန် နှင့် အခြား မြို့ များ တွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။ ဗြိတိန် နိုင်ငံ က လန်ဒန် နဲ့ တခြားမြို့ တချို့ မှာ လူအုပ်ဖွဲ့ သောင်းကျန်းနေမှုတွေ ကြောင့် ၃ရက် ကြာ မငြိမ် မသက် ဖြစ်နေ ခဲ့ပြီးတဲ့ နောက် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ် ကင်မရွန်း က ဥပဒေ စိုးမိုး မှု ပြန်ရပြီး တည်ငြိမ်မှု ပြန် ရရှိအောင် လိုအပ်တဲ့ နည်းလမ်း မှန် သမျှ လုပ်ဆောင် သွား မယ်လို့ ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ် ကမ်မရွန်း (David Cameron) က လွှတ်တော်ကို ခေါ်ယူထားပါတယ်။ လမ်းမတွေပေါ်မှာလည်း ရဲအင်အားကို ၃ ဆနီးပါး တိုးပြီး ချထားပါတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ မဖြစ်သင့် မဖြစ်ထိုက်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပြီး အခွင့်အရေးသမားတွေက လုပ်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲ ဖြစ်သလို ဘယ်လိုမှ လက်ခံနိုင်စရာ မရှိဘူးလို့ ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ် နစ်ခ် ကလက်ဂ် (Nick Clegg) က ပြောပါတယ်။ အခုဖြစ်နေတဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေဟာ နှစ် တော်တော်များများအတွင်း ဗြိတိန်က မြို့တွေမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေထဲမှာ အဆိုးဝါးဆုံးပါပဲ။ ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်နေသူတွေ ကို ရပ်တန်းက ရပ်အောင် လုပ်သွားရမယ်၊ ရဲ အရေအတွက် နောက်ထပ် တသောင်း ကို လန်ဒန် က လမ်း တွေ ပေါ်မှာ ပိုချထား မယ် ၊ ရဲ တွေ ရဲ့ အရေးယူ ဆောင် ရွက်မှု ကို လည်း ပို မြှင့်မယ်၊ အဖမ်းအဆီးတွေ ကို ပိုလုပ်မယ် လို့ လည်း သူ က ဆိုပါတယ်။အခုလို ရဲအင်အား တိုးချ တာကြောင့် လန်ဒန် မှာ ချ ထားတဲ့ ရဲ အရေ အတွက် က တသောင်း ခြောက်ထောင် အထိ ရှိသွားပါပြီ။ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ ကျောင်းသားတွေအပေါ် ပြန်လည် တုန့်ပြန်မှုက အလွန်းပြင်းထန်လွန်းပါတယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့လုံးဝ မရှိပဲ ရဲအင်းမားတွေ ၃ ဆ ကျော် တိုးချထားတာတွေ၊ ဆန္ဒပြသူတွေကို လုံးဝ လက်မခံနိုင်ဘူး ပြောကာ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ကိုင်တွယ်မှုတွေက လူသားဆန်မှု မရှိပါဘူး။ အာဏာရှင် ဆန်လွန်းနေပါတယ်။ ဘန်ကီမွန်း နှင့် အိုဘားမားအပါအဝင် အခြား နော်ဝေ၊ အော်စတြေးလျှနှင့် အနောက်နိုင်ငံများမှ အစိုးရများ သတင်းစာဖတ်ဖို့လိုပြီး စိုးရိမ်သင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တော့ ခင်ဗျားတို့လဲ ဒီလိုလုပ်ရတာပဲမဟုတ်လား မီးတွေ ဒီလောက်လောင်နေတာ ဗြိတိန်မီးသတ်တွေက ၅ မနစ်လောက်ပဲ ဖျန်းပြီး ပြန်သွားကြလို့များလား ကျောင်းသားတွေက အဆောက်အအုံတွေကို ဖျက်ဆီးတာ၊ မီးရှို့တာ က မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ် ဟုတ်/မဟုတ် သိကြပြီလား... ဤသို့ လန်ဒန်မြို့လယ်ခေါင်တွင် မီးဟုန်းဟုန်း တောက်လောင်နေ သော်လည်း အမေရိကန်အစိုးရနှင့် ကုလသမဂ္ဂတို့က မစိုးရိမ်ကြသေး ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ် ကမ်မရွန်း (David Cameron) ဟာ အီတလီမှာ သွားရောက်ပြီး အနားယူနေတာကို ဖြတ်တောက်ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း အဆိုးရွားဆုံး ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဆူပူ အုံကြွမှုတွေကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ လန်ဒန်မြို့ကို ရေးကြီးသုတ်ပြာ ဆိုသလို ပြန်လာ ခဲ့ရကြောင်းလဲသိရပါတယ် ။ မြို့တော်တစ်ခွင် မီးဟုန်းဟုန်း တောက်လောင်နေသော်လည်း အီတလီတွင် အပန်းဖြေမပျက်သည့် ဒေးဗစ်ကင်မရွန်း အခုချိန်ထိတော့ လူပေါင်း ၂၁၅ ယောက်ကို ဖမ်းဆီးထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ဗြိတိန် ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောကြားပေမယ့် ဒီထက် ၃ ဆလောက်ပိုလိမ့်မယ်လို့ ဒေသခံတွေကပြောကြားပါတယ် ။ရဲအရာ ရှိ ၅ ယောက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး ၃ ယောက်ကတော့ ဆန္ဒပြသူတွေကို လိုက်လံဖမ်းဆီးဖို့ ကြိုးစားနေတုန်းမှာပဲ ကားတွေနဲ့ တက်ကြိတ်တာကို ခံခဲ့ရတယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။စနေ နေ့ က လန်ဒန် မြို့ တော်တင်ဟမ် အရပ်မှာ ဖြစ်ပွား ခဲ့တဲ့ နွေရာသီ အားလပ်ရက် အီတလီ နိုင်ငံ မှာ သွားရောက် အပန်း ဖြေဖို့စီစဉ် ထား တဲ ဗြိတိသျှ ၀န်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ် ကင်မရွန် က နိုင်ငံ ကို ပြန်လာ ပြီး အခြေအနေ တွေ ပြန်တည် ငြိမ်အောင် သူကိုယ်တိုင် ကိုင် တွယ် မယ် လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံ တ၀ှမ်း ထိ ဆက်လက် ပြန့် သွား မယ် လို့ ယူဆရ တဲ့ ဒီ အရေး အခင်း ကို စကော့တလန် ယာဒ် ရဲ တပ်ဖွဲ့ကိုယ်တိုင် ကိုင် တွယ် ဖို့ခက်ခဲ နေတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလူထု အုံကြွမှု တွေ ဟာ တွစ်တာ နဲ့ဖေ့ဘွတ် တို့ကြောင့် ပိုမို အားကောင်းလာ ပြီး လန်ဒန် မြို့ လယ် နဲ့အန်ဖီး အရပ် မှာ ဆို ရင် ဆယ် ကျော် သက် တွေ က အကျီ်အနက်ရောင် တွေ ၀တ် လက်နက် တွေ ကိုင် ဆောင် ပြီး အင်အား ပြကြတယ် လို့ဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံကြီးသားတွေတဲ့လား...... ဗြိတိန်အစိုးရကတော့ ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ မဖြစ်သင့် မဖြစ်ထိုက်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပြီး အခွင့်အရေးသမားတွေက လုပ်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲ ဖြစ်သလို ဘယ်လိုမှ လက်ခံနိုင်စရာ မရှိဘူးလို့ ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ် နစ်ခ် ကလက်ဂ် (Nick Clegg) က ဆန္ဒပြသူတွေကို ဆူပူသောင်းကျန်းသူတွေလို့ အမည်တပ်ပြီးအပြစ်ဖို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ၈ လေးလုံး ၂၃ နှစ်ပြည့်များ လုပ်နေသလား ထင်မှတ်မှားရ လန်ဒန်မြို့ မြောက်ပိုင်းမှာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိတဲ့ အခြေအနေ၊ အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ များပြီး လူမှုဖူလုံရေး အစီအစဉ်တွေ လျှော့ချခံနေရတာတွေအပေါ် မကျေနပ်မှုတွေ ကြီးထွားနေတာကြောင့် အခုလို ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတာလို့ လန်ဒန်မြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။ ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့တော်က ဆင်းရဲသားရပ်ကွက် တခုမှာ စနေညပိုင်းက အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဗြိတိသျှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရော ဆန္ဒပြသူတွေပါ ဒဏ်ရာရသွားကြပြီး လူတချို့ အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ကြာသပတေးနေ့က ရဲရဲ့ ပစ်ခတ်မှုနဲ့ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတဦး သေဆုံးသွားရတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာက အစောပိုင်းမှာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ စတင်ခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာအစိုးရရဲ့ ကိုင်တွယ်ပုံညံ့ဖင်းတာကြောင့် အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပါလာတဲ့အထိ ဖြစ်ပေါ်တာဖြစ်တယ်လို့ ဝေဖန်သူတွေလဲ ၇ှိနေကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ် ။အခြေအနေအရပ်ရပ်က အလွန်ကြောက်စရာ ကောင်းပြီး အလွန်စိုးရိမ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ဘန်ကီမွန်းနှင့် အိုဘားမားတို့ မစိုးရိမ်နိုင်ပေမယ့် ခုလက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဗြိတိန်အာဏာရှင် အစိုးရ၏ လက်နက်ကိုင်ပြီး ကျောင်းသားများကို ဖမ်းစီးနိမ်နှင်းနေခြင်းနှင့်ပတ်သက်လို့ Myanmar Express အဖွဲ့သားများမှ အလွန်အင်မတန် စိုးရိမ်မိကြောင်း ပါ ခင်များ.......။ Myanmar Express
ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသူများအား ချွင်းချက်မ...
အပြန်အလှန် တရားစွဲ ရပ်စဲရေး အတွက် Myanmar Express ...
အာရပ်လှိုင်း အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးက ဗြိတိန်ကိုပျံ့နှ...
ဆိုင်းဘုတ်လေးတော့ တည့်အောင် မှန်အောင် ကိုင်ကြပါဗျာ...
ရှစ်လေးလုံးတုန်းက မမွေးသေးသူများ ရှစ်လေးလုံးစိတ်ဓာ...